Badbaadada carruurta (Lastensuojelu)
Waa adeeg shaqo ah oo bulshadu leedahay, hadafka laga leeyahayna waa in la sugo inuu ilmuhu helo horumar iyo nolo wanaagsan oo dheellitiran. LBadbaadada carruurtu waxay u qaybsantaa badbaadada carruurta ee u gaarka ah ilmaha yo qoyska iyo badbaadada carruurta ee ka hortagga ah.
Badbaadada carruurta ee ka hortagga ah (Ehkäisevä lastensuojelu)
Badbaadada carruurta ee ka hortagga ah waxaa loola jeedaa waxqabadyada ayqolyaha kala duwan qabanqaabiyaan, kuwaas oo lagu sugayo carruurta barbaaridooda, horumarkooda iyo wanaagooda nololeed, waana waxqabadyo lagu taageero waalidnimada. Badbaadada carruurta ee ka hortagga ah waa taageero khaas ah oo ay degmada iyo qolyaha kale ee deegaanka ka shaqeeyaa bixiyaan, marka aanu ilmuhu ama qoysku macaamiil ka ahayn badbaadada carruurta. Badbaadada carruurta ee ka hortagga ah meelaha laga fuliyo waxaa ka mid ah rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba meelaha kale ee daryeelka caafimaadka, xannaanada, goobaha waxbarashada iyo hawlaha dhallinyarada.
Badbaadada carruurta ee loogu talagalay ilmaha iyo qoyska (Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu)
Badbaadada carruurta ee loogu talagalay ilmaha yo qoyska waxaa la fuliyaa iyadoo la samaynayo u kuurgalka lagu ogaanayo in loo baahan yahay badbaadada carruurta iyo qorshaha macaamiisha, iyo weliba iyadoo la qabanqaabinayo waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan. Ku meeleynta ilmaha meel aan aheyn gurigiisa daryeele ku meelgaar ah iyo daryeelka danbe waa mid had iyo goor gaar u ah qoyska iyo ilmaha niddaamka badbaadadda carruurta.
Arrin ah badbaadada carruurtu waxay xitaa ku bilaaban kartaa, iyadoo waalidku ama ilmaha laftiisu la soo xiriiro shaqaalaha badbaadada carruurta oo codsado caawimo. Markay sidan dhacdo lama yiraahdo waa wargelin badbaadada carruurta ah ee waxaa la yiraahdaa waa codsi.
Codsi ah in la qiyaaso in loo baahan yahay badbaadada carruurta (Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi)
Qoyska ama ilmuhu wuxuu isagoo shaqaalaha la socda caawimo ka dalban karaan badbaadada carruurta. Haddii caawimo la raadsado iyadoo lala socdo tusaale ahaan shaqaalaha iskuulka ama xannaanada, markaas lama samaynayo wargelinta badbaadada carruurta ee waxaa la samaynayaa codsi ah in la qiyaaso in loo baahan yahay badbaadada carruurta.
Danta ilmaha (Lapsen etu)
Qiimeynta baahida badbaadadda carruurta iyo hirgelinta badbaadadda carruurta waa mida u baahan marka hore in la qiimeeyo danta ilmaha, taasoo lagu raadinayo xalka ugu wanaagsan ee ilmahaas ku haboon.
Daryeel ku meelgaar ah (Sijaishuolto)
Daryeelka ku meelgaarka ah waa la weerigis, si degdeg ah loogu meeleeyey ama ay gudiga cadaaladda si ku meelgaar ah u xukmiyeen in daryeelkii iyo kobcintii ilmaha u qabanqaabiyeen meel aan aheyn gurigiisa
Daryeel xero ah (Laitoshoito)
Daryeelka xerada ah waxaa loola jeedaa marka ilmaha la meeleeyey hayntiisa iyo barbaarintiisa iyo daryeelkiisa looga qabanqaabiyo meel aan gurigiisa ahayn oo ah xero badbaadada carruurta ah.
Daryeelka dambe (Jälkihuolto)
Daryeelka dambe waa taageero iyo caawimo la qabanqaabiyo, markay meelayntu dhammaato ka dib. Ujeedada laga leeyahay daryeelka dambe waa in ilmaha ama qofka dhallinyarada ah loo fududeeyo siduu ugu soo noqon lahaa gurigiisa ama uu u madax bannaanaan lahaa oo isu deberi lahaa. Daryeelka dambe wuxuu socon karaa ilaa ay qofka dhallinyarada ah uga buuxsamayso 21 sano.
Daryeelle qoys (Perhehoitaja)
Daryeelle qoys waa qof gurigiisa dadka ku siiya daryeelka qoyska. Daryeellayaasha qoyska waxaa kaloo lagu magacaabaa waalid ku meelgaar ah.
Guri qoyseed xirfadaysan (Ammatillinen perhekoti)
Guri qoyseedka xirfadaysan waa qoys daryeele ah, taas macneheedu waa gurigu wuxuu leeyahay ogolaanshaha sharci ahaan la isaga baahan yahay, si gurigu u noqon karo guri qoyseed (guri carruur lagu meeleeyo). Sida caadiga ah guri qoyseedku waa guri ay deggan yihiin laba qof oo xirfadlayaal ah oo masuul ka ah daryeelka iyo barbaarinta carruurta guriga lagu soo meeleeyo.
Guriga ammaanka (Turvakoti)
Guryaha ammaanku waxay caawiyaan dadka qoyskooda kala kulma dilitaan iyo dagaal iyo dadka dareemaya inay jirto khatar ah, inay qoyskooda kala kulmayaan dilitaan iyo dagaal. Qofku keligii ama isagoo carruurta wata ayuu aadi karaa guriga ammaanka saacaddu wakhtigay doontaba ha ahaatee. Guryaha ammaanku waxay ku yaallaan magaalooyinka waaweyn, hase yeeshee degmooyinka kale xitaa waa laga soo aadi karaa.
Guriga ammaanka ee dhallinyarada (Nuorten turvatalo)
Guryaha ammaanka ee dhallinyaradu waxay caawiyaan dhallinyarada xaalad adag oo nolosha ah oo jirta darteed u baahan caawimo si ay xaaladaas adag uga baxaan, guryaha ammaanka dhallinyaradu waxay kaloo caawiyaan dhallinyaradaas qoysaskooda.
Guriga carruurta (Lastenkoti)
Guriga carruurtu waa xero badbaadada carruurta ah oo ay deggan yihiin carruur iyo dhallinyaro meesha lagu meeleeyey. Carruurta iyo dhallinyarada la meeleeyey ee jooga guriga carruurta daryeelkooda waxaa u xilsaaran shaqaale wax soo bartay. Guryaha carruurta ee Finland ku yaallaa waa sida guryaha caadiga ah yihiin si ku dhow, marnaba ma aha guryo aad u waaweyn. Guryaha carruurtu waxay ku dhaqmaan siduu sharcigu dhigayo, shaqadoodana waa la ilaaliyaa inay sharciga dhawraan.
Heeganka sooshalka (Sosiaalipäivystys)
Heeganka sooshalku wuxuu u xilsaaran yahay afar iyo labaatanka saac oo maalin walba ah caawimooyinka sida degdegga ah loogu baahan yahay. Meesha lagala xiriiro Heegan sooshalka waxaad ka heleysaa buugga telefoonnada ama bogga internetka ee degmadu leedahay ama lambarka 112 ee la waco markay dhibaato jirto, ama isbitaallada ama booliska.
Kamid ahaansho (Osallisuus)
Kamid ahaanshaha waxaa loola jeedaa in dhamman dadku xaq u leeyihiin si cadaaladda iney kaga qeybqaadn karaan saameyna ku yeelaan karaan waxwalboo arrimihiisa la xiriira iyo horumarka bulshada. Kamid ahaanshaha ilmaha waa markii arrinku yahay, inuu ka qeyb yahay go’aaminta, fulinta iyo qiimeynta arrimihiisa howlaha shaqo ee la xiriira. Ilmuhu wuxuu xaq u leeyahay kamid ahaanshihiisa dhammaan wixii la xiriira arrimihiisa oo dhan iney ahaadan kuwo sirtooda aad loo xifdiyo sida waafqsan dastuurka.
La tashiga ehelka muhiimka ah (Läheisneuvonpito)
La tashiga ehelka muhiimka ah waa hab loo shaqeeyo oo ah in la isku dayo in xal loo helo dhibaatooyinka jira, iyadoo si wadajir ah loola shaqaynayo dadka ehelka ah ee muhiimka u ah ilmaha iyo qoyska. Shirka la tashiga ehelka muhiimka ah lala yeelanayo ayey shaqaalaha maamulku kula kulmaan oo wadahadallo la yeeshaan dadka ilmaha arrintiisa darteed muhiimka ah.
La wareegid (Huostaanotto)
La wareegidda macneheedu waa masuuliyadda ilmaha daryeelkiisa iyo barbaarintiisa ayaa waxay ku wareegeysaa shaqaalaha maamulka. Siduu sharcigu dhigayo, ilmaha waa in lala wareegaa, haddii xaaladda uu ilmuhu ku korayo ama ilmaha habdhaqankiisu keenayaan, in ilmaha caafimaadkiisa iyo horumarkiisu khatar aad ah ku sugan yihiin. Hase yeeshee la wareegidda waxaa la samayn karaa oo keliya, hadday ilmaha dantiisu sidaas ku jirto, ayna caddaato in waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan ay noqdeen kuwo aan ku filnayn.
La wareegid aan raalli laga ahayn (Tahdonvastainen huostaanotto)
La wareegidda aan raalli laga ahayn macneheedu waa marka ilmo 12 sano u buuxsentey ama waalidkiis aanay raalli ka ahayn la wareegidda. Markay sidaasi dhacdo, maxakamadda ayey tahay inay arrinta go’aan ka gaarto. Shaqaalaha sooshalka ee u xilsaaran ilmaha arrimihiisa ayey tahay inuu diyaariyo codsi uu maxakamadda maamulka ugu soo jeedinayo, in ilmaha lala wareego. Ka dibna maxakamadda maamulku intay arrinta ka baaraan degto ayey xal ka gaareysaa siday ilmaha dantiisu ku jirto.
Maxakamadda maamulka (Hallinto-oikeus)
Maxakamadda maamulku waxay qayb ka tahay maamulka garsoorka, waxayna falanqayn ku samaysaa cabashooyinka laga soo sameeyo go’aamada ay gaaraan shaqaalaha maamulka ee kala duduwan. Arrimaha badbaadada carruurtana maxakamadda maamulku go’aan ayey ka gaartaa.
Meelaynta macneheedu waa ilmaha ayaa waxaa lagu meeleeyaa daryeel ku meelgaar ah, taas oo macneheedu yahay ilmaha hayntiisa iyo barbaarintiisa waxaa loo qabanqaabiyaa si ah in la geeyo meel kale oo aan ahayn gurigiisa.
Meelayn degdeg ah (Kiireellinen sijoitus)
Meelaynta degdegga ah macneheedu waa, in isla markiiba ilmaha halista ku jira loo maareynkaraa gurigiisa meel aan aheyn. Baahida meeleynta degdeg ah waxay k uimaan kartaa markii tusaale, ay xaalada guriga ama waxyaabihii lagu daryeeli lahaa oo ilmuhu u baahnaa oolin, wax khatar degdeg ah ku noqon kara ilmihii caafimaadkooda ama koriimadooda ama markii, waalidku yihiin kuwo aan markaa daryeeli karin ilmihii, taasina ay halis ku tahay markiiba ilmihii caafimaadkooda iyo koriimadooda
Meelaynta oo ah waxqabad taageero oo daryeelka furan ah (Sijoitus avohuollon tukitoimena)
Meelaynta oo ah waxqabad taageero oo daryeelka furan ah waxaa loola jeedaa marka ilmaha ama qoyska oo dhan wakhti gaaban la meeleeyo oo la geeyo meel kale oo aan gurigooda ahayn. Meelaynta daryeelka furan ah mar walba qofku ama qoysku wuu u madax bannaan yahay oo khasab ma aha.
Qorshaha macaamiisha (Asiakassuunnitelma)
Qorshaha macaamiishu ee badbaadadda carruurta waa warqad lagu qoro waxyaabaha keenaya in ilmaha iyo qoysku caawimo u baahan yihiin, iyo waxyaabaha la rabo inay wax iska beddelaan. Waxaa kaloo qorshaha macaamiisha lagu qoraa, siday badbaadada carruurtu ku talo jirto inay u caawiso ilmaha iyo qoyska, iyo wakhtiga ay ku qaadanayso. Ilmaha macaamiisha ka ah badbaadada carruurta waa in mar walba loo sameeyaa qorshaha macaamiisha. Waana in qorshaha macaamiisha dib loo fiiriyaa haddii loo baahdo, laakiin waa in ugu yaraan sannadkiiba hal mar dib loo fiiriyaa. Haddii loo baahdo waalidka xitaa waxaa loo sameeyaa qorshaha macaamiisha oo u gaar ah. (Sharciga Badbaadada Carruurta
Qoys daryeelle ah (Perhehoito)
Qoyska daryeelaha ah waxaa loola jeedaa in ku meeleynta ilmaha daryeelkooda, kobocooda iyo xannaaneyntooda lagu meeleeyey meel aan aheyn gurigiisa oo ah guri qoys caadiya ama guri qoyseed xirfadysan.
Qoys ku meelgaar ah (Sijaisperhe)
Qoyska ku meelgaarka ah waa qoys bixiya daryeelka qoyska oo haya ilmo aanay dhallin, ilmahaas oo ah mid sababo badbaadada carruurta ah dartood loogu meeleeyey qoyskaas. Qoyska ku meelgaarka ahi wuxuu ilmaha u noqonayaa meel uu ku barbaaro oo ku noolaado, oo qoysku wuxuu ilmaha u gelayaa booskii waalidkiis. Waalidiinta qoyska ku meelgaarka ah waa loo tababaraa hawshan, waana dad loo aqoonsaday inay hawshan ka soo bixi karaan. Ilmuhu isagoo qoyskan ku meelgaarka ah la jooga ayuu la kulmaa waalidkiisa saxda ah ee dhalay. Waalidiinta ku meelgaarka ah waxaa kaloo lagu magacaabaa qoysaska daryeelayaasha ah.
Rugta daryeelka hooyada iyo dhallaanka (Äitiys- ja lastenneuvola)
Finland gudeheeda rugta daryeelku waa adeeg lacag la’aan ah oo dadka ka caawiya daryeelka caafimaadka carruurta. Hooyadu markay uurka leedahay bay tagtaa rugta daryeelka hooyada. Rugta daryeelka hooyada ayaa lagula socdaa hooyada iyo ilmaha dhalan doona caafimaadkooda iyo wanaagooda. Ilmaha aan da’da iskuulka gaarin koriinkiisa iyo horumarkiisa waxaa lagula socdaa rugta daryeelka dhallaanka. Tusaale ahaan ilmuhu tallaalada uu u baahan yahay wuxuu ka helaa rugta daryeelka dhallaanka.
Shaqaalaha qoyska (Perhetyöntekijä)
Shaqaalaha qoysku wuxuu la shaqeeyaa qoysaska carruurta leh oo waalidka ayuu ka caawiyaa carruurta hayntooda, daryeelkooda iyo barbaarintooda. Shaqaalaha qoysku wuxuu kaloo waalidka ka caawiyaa hawlaha kale ee guriga laga qabto.
Shaqaalaha sooshalka ah ee u xilsaaran ilmaha arrimihiisa (Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä)
Ilmo walba oo macaamiil ka ah badbaadada carruurta waxaa loo magacaabaa qof sooshal u ah oo ka shaqeeya ilmaha arrimihiisa, qofkaas sooshalka ah ayaa la yiraahdaa shaqaalaha sooshalka ah ee u xilsaaran ilmaha arrimihiisa. Qofka sooshalka ah shaqadiisu waa inuu ka shaqeeyo siduu ilmuhu u heli lahaa taageerada iyo adeegyada uu u baahan yahay. Shaqaalaha sooshalka ah ee u xilsaaran ilmaha arrimihiisa ay waajib ku tahay iney ku howlanaato in, dantii ilmuhu u qabsoonto
Shaqaalaha sooshalka ee badbaadada carruurta (Lastensuojelun sosiaalityöntekijä)
Shaqaalaha arrimaha bulshada ee badbaadada carruurtu waxay ka shaqeeyaan adeegyada dadweynaha. Shaqadooduna waxay tahay in xalinta arrimaha macaamiisha badbaadda carruurta iyo adeegyada qorsheynta gaarka u ah macaamiisha, qabaqaabinta, kormeerida iyo qiimeynteeda. Shaqaalaha arrimaha bulshada waa inuu ahaadaa xirfadle sida waafaqsan sharciga: Waa inuu iskuul ku soo dhigtey aqoonteedena leeyahay howsha uu qabanayo.
Shaqaale iskuulka u qaabilsan arrimaha bulshada (Koulukuraattori)
Shaqaalaha iskuulka u qaabilsan arrimaha bulshadu waa qof iskuulka sooshal u ah, wuxuuna caawiyaa oo taageeraa ardayda iyo qoysaskooda. Shaqaalaha iskuulka u qaabilsan arrimaha bulshadu wuxuu wax caawin karaa, tusaale ahaan markuu ardaygu dhibaatooyin kala kulmo iskuul dhigashada ama xiriir saaxiibeedka, ama hadday ardayga noloshiisa ku yimaadaan isbeddello. Waalidkuna waxay shaqaalaha iskuulka u qaabilsan arrimaha bulshada kala hadli karaan waxyaabaha ku saabsan xaaladda qoyska ama arrimaha barbaarinta.
Shaqo qoys (Perhetyö)
Shaqo qoysku waa waxqabad qoysaska lagu taageero, si ay isaga debberaan waxyaabaha nolosha caadiga ah ee jira iyo xaaladaha kala duduwan ee nolosha. Degmooyinka kala duduwani way ku kala duduwan yihiin shaqo qoysku waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo hababka loo sameeyo.
Sharciga Badbaadada Carruurta (Lastensuojelulaki)
Xeerarka khuseeya badbaadada carruurtu waxay ku qeexan yihiin Sharciga Badbaadada Carruurta. Waxaa isna ku lifaaqan xeerka arrimaha bulshada, xeerka daryeelka ilmahai yo xaquuqda la kulanka ilmahai yo weliba heshiiska xaquuqda ilmaha oo qeexeysa la dhaqanka iyo badbaadadda carruurta.
U kuurgalka lagu ogaanayo in badbaadada carruurta loo baahan yahay iyo in kale (Lastensuojelutarpeen selvitys)
Baahida badbaadadda carruurta qiimeynteeda waxaa laga wadaa, in shaqaalaha arrimaha bulshadu qiimeeyo xaalada koriimo ee ilmahai yo weliba fursadaha munaasbka ah ee waalidku ay ka geysanayaan daryeelka iyo koriimada ilmaha. Haddii qiimeynta baahida badbaadadda carruurta ku soo shaac baxaan in ay jirto baahi adeega badbaadadda carruurta, iney markaa billaabaneyso macmiilnimada badbaadadda carruurta.
Waalidiinta ku meelgaarka ah (Sijaisvanhemmat)
Qoyska ku meelgaarka ah waalidkiisa ayaa la yiraahdaa waalidiinta ku meelgaarka ah. Waalidiinta ku meelgaarka ah waxaa kaloo lagu magacaabaa qoysaska daryeelayaasha ah.
Wargelinta badbaadada carruurta (Lastensuojeluilmoitus)
Wargelinta badbaadada carruurta macneheedu waa qofka shaqaalaha sooshalka ah baa wuxuu helay war ku saabsan ilmo ay suuragal tahay inuu caawimo u baahan yahay. Wargelinta badbaadada carruurta waxaa loo soo gudbiyaa xafiiska sooshalka ee degmada, waxaana loogu soo gudbin karaa telefoon ahaan,qoraal ahaan ama iyadoo shakhsi ahaan loo yimaado xafiiska sooshalka. Wargelinta badbaadada carruurta waxaa soo gudbin kara qof walba oo ka welwelsan nolol wanaagga ilmaha. Shaqaalaha maamulka ee la shaqeeya qoysaska iyo carruurta waxaa waajib ku ah inay soo gudbiyaan wargelinta badbaadada carruurta, haddii ay ka welwelsan yihiin nolol wanaagga ilmaha.
Waxbarashada hore (Esiopetus)
Waxbarashada hore waxaa loogu talagalay dhammaan carruurta aan da’da iskuulka gaarin, waxaana la dhigtaa sanad kahor xiliga waxbarashada waajibka ah. Sida caadiga ah ilmuhu waxbarashada hore wuxuu bilaabaa sannadka uu lix jirsanayo. Marka lagu jiro wakhtiga waxbarashada hore, iyadoo la isticimaalayo ciyaarid iyo wax wada samayn buu ilmuhu bartaa aqoonta iyo farsamooyinka uu u baahan doono markuu iskuulka bilaabo. Dhammaan Ilmuhu waa iney ka qeybqaataan waxbarashadaas, taasoo ah lacag la’aan. Waalidka ayaa iska leh masuuliyada ah, in ilmohoodu ka qaybqaato waxbarashada hore ama waalidku inuu u rabo waxbarashada hore oo kale taasoo ujeedkeedu inuu gaaro qabashada howlahaas waxbaritaanka. Finland waxbarashada hore waxaa bixiya xannaanooyinka iyo iskuullada.
Waxbarashada khaaska ah (Erityisopetus)
Waxbarashada khaaska ah waxaa loogu talagalay ardayda xagga iskuul dhigashada u baahan taageero khaas ah. Sababuhu noocyo badan bay noqon karaan, sida tusaale ahaan waxbarashada oo ku adag (oppimisvaikeudet), jirro, daahitaan horumarka koriinka ah ama sabab kale oo u dhiganta. Waxbarashada khaaska ah waxaa la dhigan karaa, iyadoo waxbarasho barayfit ah ama iyadoo koox yar wax loo dhigayo.
Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan (Avohuollon tukitoimet)
Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan waa adeegyo qoyska loo qabanqaabiyo oo taageeraya, caawinayana ilmaha iyo waalidka iyagoo gurigooda ku nool. Waxqabadyada taageerada ee daryeelka furan qofku laguma khasbo ee waa inuu isagu ogolaado, waxayna ku salaysan yihiin wadashaqayn lala sameeyo qoyska. Waxqabadyada taageerooyinka ah waa kuwo mar walba si gaar ah loogu qorsheeyo cidda loogu talagalay, si ay u noqdaan kuwo ku haboon baahida ilmaha iyo qoyska. Ilmaha keligii baa loo qabanqaabin karaa waxqabadyo taageero ah ama waalidka oo keliya, amaba qoyska oo dhan baa si wadajir ah loogu qabanqaabin karaa. In waxqabadyada taageerada loo baahan yahay waxaa lagu qoraa qorshaha macaamiisha. Go’aanka ku saabsan waxqabadyada taageerada ee qoyska loo ogolaaday waxaa gaara shaqaalaha maamulka. Qoyskuna wuxuu dalban karaa in go’aanka la gaarey la beddelo.
Xadidaadaha la sameeyo (Rajoitustoimenpiteet)
Xadidaadaha la sameeyo ee la isticimaalo markay jirto daryeel ku meelgaar ah waa sida wada xiriiridda oo la xadido, baaritaanka qofka iyo qabasho. Shuruudaha ku saabsan xadidaadaha la sameeyo oo dhan iyo isticimaalidoodu waxay si faahfaahsan ugu qeexan yihiin sharciga. Xadidaadaha la sameeyo waxaa isticimaali kara oo keliya xeryaha, laakiin xadidaadada wada xiriiridda ah waxaa kaloo isticimaali karaqoyska daryeelaha ah.
Xafiiska sooshalka (Sosiaalitoimisto tai sosiaalitoimi)
Degmo waliba waxay leedahay xafiis sooshal, kaasoo dadka degmada deggan ay ka helaan adeegyo kala duduwan iyo caawimooyin. Xafiiska sooshalka ayaa u xilsaaran adeegyada badbaadada carruurta.
Xerada badbaadada carruurta (Lastensuojelulaitos)
Xarada badbaadada carruurtu waa meel carruurta lagu hayo oo dad shaqaale ah oo loo soo tababaray ay u xilsaaran yihiin daryeelka carruurta iyo dhallinyarada meeshaas lagu meeleeyey. Xerayaha badbaadada carruurta waxaa ka mid ah tusaale ahaan guryaha carruurta, guryaha dhallinyarada, guryaha qaabilaadda, guryo iskuuleedyada iyo xarumaha taageerooyinka qoysaska iyo daryeelka danbe. Finland ma waaweyna xeryaha ee waxaa leysku dayaa xeryuhu iney ahaadaan guryo camal. Hawl walbooy xeryuhu qabanayaan waxay u hogaansan yihiin dasduurka, howshooduna waa lagu kormeeraa.